Ọ bụrụ n You're na-anakọta data, onye ahịa gị nwere atụmanya ndị a | Martech Zone
Fraịde, Ọgọstụ 29, 2014 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
A adịbeghị anya akụkọ site Thunderhead.com na-agbanwe agbanwe ntinye aka na ndị ahịa n'oge mgbanwe dijitalụ: Njikọ aka 3.0: Nlereanya Ọhụrụ maka Njikọ Ndị Ahịa na-enye nkọwa zuru oke banyere ahụmịhe ndị ahịa. Lee ụfọdụ ihe nchọpụta:
83% nke ndị ahịa na-enwe mmetụta dị mma banyere azụmaahịa na-etinye ezigbo ihe ọmụma na data ha jidere ndị ahịa ha, dịka ọmụmaatụ site na ịkọwapụta nkọwapụta nke ngwaahịa na ọrụ yana onyinye ndị ga-aba uru.
Ihe ato di na enyi
Ndị ọchụnta ego ga-enwerịrị nghọta gbasara iwu nke mmekọrịta sitere na nkwekọrịta n’etiti azụmahịa na ndị ahịa. Enwere isi ihe atọ nke mmekọrịta a tụkwasịrị obi nke ndị ọchụnta ego kwesịrị ịchọ i seekomi na mmekọrịta ha na ndị ahịa:
Repeatability - na-ebuputa ihe ekwere na nkwa
Selfchọ ọdịmma onwe onye nanị - hụ na enwere ọnụọgụ maka ndị ahịa
Ogologo - ịghọta otu esi ejigide ndị ahịa ogologo oge.
Inye Uru maka Exmụta Ihe Ọmụma Dị Oké Mkpa
E kwesiri ijikwa mmekorita ha na uzo igbanwe ihe omuma, gbakwunye uru ma nweta ihe oma maka ihe bara uru karia ndi ahia ha. Setịpụ ma jigide ihe mgbaru ọsọ nkịtị iji mepụta ntụkwasị obi ma wuo ezigbo njikọ:
Deliver what was promised, through taking account of customers' personal preferences and managing expectations across the customer journey.
Jide ndị ahịa ogologo oge site na ịtinye uru site na iji ozi na data iji kọwaa nkọwa nke ọrụ, nkwukọrịta na onyinye ma ọ bụ isonyere ngalaba na ịkekọrịta nkọwa nke akụkọ nzụta.
Ghọta njikere nke ndị ahịa ịkekọrịta ozi nkeonwe ka azụmaahịa wee nye ndị ahịa ha ahụmịhe ndị ahịa emelitere.
Ekwesiri igbanwe ozi nkeonwe iji nyefee oru di nma, ihe nlebara anya nke oma na ihe bara uru, nkwekorita nke mmekorita gafee ngalaba, chekwaa oge na ime ka ezi kọntaktị nke mbu na ngwaahịa na oru ndi elebara anya.
Budata akwụkwọ akụkọ ntinye aka nke Thunderhead.com n'efu 3.0 taa taa iji chọpụta echiche ọhụrụ ka etu esi elekwasị anya na iwulite njikọ ndị ahịa n'ofe ndị ahịa ga-eweta ọgaranya, mmekọrịta mmekọrịta na ndị ahịa gị.
Tags: azụmahịaakada dataahịa dataaka ndi ahiadatamgbanwe ihe omumaEkliziastisozi nkeonwemmaikwughachimmetụtaegbe eluigweachọghị ọdịmma onwe onye nanị